१० नाउर र ६ झारलको सिकार
बागलुङ । ढोरपाटन सिकार आरक्षमा यस वर्षको पहिलो याममा १० नाउर र ६ झारलको सिकार गरिएको छ । आरक्षले १० नाउर र ६ झारलकै लागि सिकार खेल्ने अनुमति दिएको थियो
काठमाडौं । कैलालीमा मंगलबार बिहान बस दुर्घटना भएको छ । कालिकोटबाट महेन्द्रनगर आउँदै गरेको ना ६ ख २८५४ नम्बरको बस गौरीगंगा –३ कुचौनीमा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाका बारेमा
काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक आज बस्दैछ । हिजो बस्ने भनिएको बैठक केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनमा गृहकार्य नपुगेको भन्दै आजका लागि सारिएको थियो । आजको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन,
मुआब्जा नपाए काम रोक्ने चेतावनी
काठमाडौं ।काठमाडौं–तराई जोड्ने दु्रतमार्ग( फास्ट ट्रयाक) निमार्णका क्रममा अधिग्रहण भएको जग्गाको उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै ललितपुरको खोकना र बुङमतीका बासिन्दाले काममा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । समाचार नागरिक दैनिकमा
सेना– प्रहरी जागिरमा घट्दो आकर्षण
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको जवान पदमा ६,२४४ माग गरेपनि ४१,७९६ आवेदन मात्रै परेको छ । सय कार्यालय सहयोगीको मागमा ३,३४५ आवदेन परेको छ । धेरै आवेदन परे क्षमतावान व्यक्तिहरु आउने
आईएनजीओको सम्पत्ति छानबिन
काठमाडौैं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी (आईएनजीओ) को चलअचल सम्पत्तिमाथि छानबिन अघि बढाएको छ । महालेखाले अगामी वार्षिक प्रतिवेदनमै समेट्ने गरी आईनजीओको चल । अचल सम्पत्ति, विदेशीबाट वार्षिक रुपमा भित्रिएको
ताइपेई । ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ–वेनको दलडेमोक्रेटिक प्रोग्रसिभ पार्टी (डिपीपी) ले स्थानीय निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजय व्यहोरेको छ ।राष्ट्रपति साईले स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो दल डिपीपी को पराजयको जिम्मेवारी लिँदै दलको नेतृत्वबाट
बोगोटा । क्यारेबियन समुद्रस्थित कोलम्बियाको स्वामित्वमा रहेको एक द्वीपमा शनिबार ६.१ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प गएको छ । अमेरिकी भौगर्भिक सेवाका अनुसार कोलम्बियाबाट २० माइल दक्षिणपूर्वमा उक्त भूकम्प गएको छ । भूकम्पबाट
एक झिल्को आगोले ४७ परिवारको बिचल्ली (फोटोफिचर)
विमल खड्का काठमाडौं । ३० घरमा बसोबास गर्दै आएका ४७ परिवारको आवास एक आगोको झिल्कोले खरानी बनाएको छ । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–९ नवीमा आइतबार राती ३ बजे लागेको आगोले ४७
निर्मलाका बुबालाई बेहोस बनाएर काठमाडौं ल्याइँदै
काठमाडौं । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तका बुवा यज्ञराज पन्तलाई बेहोस बनाएर काठमाडौं ल्याइँदै छ । असामान्य व्यवहार देखाएपछि पन्तलाई सेती अञ्चल अस्पतालमा बेहोस बनाएर शनिबार राति गाडीमार्फत काठमाडौं पठाइएको हो । यसअघि
सिन्धुपाल्चोक बस दुर्घटना : १३ तीर्थयात्रीको मृत्यु (अपडेट)
तीर्थयात्री बोकेकाे बस दुर्घटना, ठूलाे हताहतीकाे आशंका
३९ हजार शिक्षक आवश्यक
जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडको अध्यक्षमा डा. पौडेल
चलचित्र विकास बाेर्डका अध्यक्ष भट्टराईको निधन
२०७६ मंसिर ३० गतेकाे राशिफल
मात्तिएका सन्यासीमाथि के काे विश्वास ?
एनआईसी एसिया बैंकको दुई शाखा सञ्चालनमा